Banyere Anyị - Shandong Honglu Arọ Industry Co., Ltd
Shandong honglu arọ ụlọ ọrụ co., LTD., Mmekọ na Shandong tang otu, otu co., LTD., Tọrọ ntọala ke 1956, ụlọ ọrụ na ọrụ atọ na puku ndị mmadụ, teknuzu nnyocha na mmepe otu nke karịrị narị atọ ndị mmadụ, gafeworo mmepụta edoghi , mkpuchi ogbako, ịgbado ọkụ ogbako, zọ ogbako, nwere ọgaranya ahụmahụ na mmepụta, nnyocha na mmepe.
anyị ụlọ ọrụ nnyocha na mmepe nke arọ ụlọ ọrụ bụ ihe mbụ na anụ ụlọ n'ichepụta nke Ngwuputa gbawara-àmà engineering ígwè ụlọ ọrụ, niile nke ụlọ ọrụ na ya technology onwe ha nnyocha na mmepe, na onwe ha ikike arịa amamihe, bụ isi Ngwuputa rubber_tyred iga mkpakọrịta so, bụ mma site òtù ụlọ ọrụ Benchmarking ụlọ ọrụ.
Tọrọ ntọala na mmalite nke AnBiao aku ngwaahịa asambodo, nzere asambodo, niile na ngwaahịa ndidi mba nche center mgbagwoju technical oditi, bụ ihe mbụ na anụ ụlọ ụlọ ọrụ na-m gbawara-àmà asambodo. Site na mba nche nnyocha center na nchekwa na-elekọta Bureau nkwonkwo saịtị nyochaa, site na ụlọ ọrụ zuru ezu set nke teknuzu data, dị iche iche na ngwá, mmepụta ike, na ihe karịrị 100 software na hardware.The ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji coal m, phosphate ore , ígwè ore na gold m. The ụgbọala na ya n'akụkụ, na usoro na ndị ọzọ na oru ngo e ọdịda mba patent akwụkwọ.
Dị ka mba nche chọrọ nke coal m na nke m, m na-aghọ ndị ọzọ na ndị ọzọ dị elu ka ihe a chọrọ njem na ngwá, anyị ụlọ ọrụ mmepụta nke mgbawa na-àmà na udu mmiri braking njem na ngwá eme ihe chọrọ nke mba nke m nchekwa, bụ a ngwaahịa nke oke maka ọtụtụ nnukwu ìgwè. The ụlọ ọrụ na-adabere n'ụlọ na-aga n'ụwa. Esonụ mba mmepe atụmatụ, na ọkọnọ n'akụkụ nwayọọ nwayọọ ọma mgbanwe na ọhụrụ ume ụlọ ọrụ, mụ na ụlọ Ngwuputa ahịa, na-ịzụlite ọhụrụ ume ngwaahịa ka mma ngwaahịa mmata na ahịa. Ifịk ifịk layout Central Asia, n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Asia mba ọzọ ahịa. Na na Russia, Myanmar, na Philippines na ndị ọzọ na mba eguzobewo azụmahịa mmekọahụ.
Shandong honglu arọ ụlọ ọrụ co., LTD.Located na Ngwuputa engineering r & d na imewe nke ígwè na akụkụ, n'ịgbaso ihe "ọrụ, ọhụrụ, a pụrụ ịdabere na" echiche nke mmepe, rube isi na "ime ezi na ike, na-eme ogologo" mmepe nke iwu, na-agba mbọ na-anụ ụlọ mbụ na klas, mba ma ama engineering ígwè ụlọ ọrụ.
Okwu: dịghị . 1 meishan ụzọ, zibo mmepe mpaghara, zibo obodo, Shandong n'ógbè.